FBC - Mooyyaalee fi naannichaa lammiileen buqqa’an deebi’aa jiru- Waajjiricha
Mooyyaalee fi naannichaa lammiileen buqqa’an deebi’aa jiru- Waajjiricha
Finfinnee, Bitootessa 12,2010(FBC)- Mooyyaalee fi naannichaa lammiileen qayee isaanitirraa buqqa’anii Keeniyaa cee’an deebi’aa jiraachuu Waajjirri Sakreetaariyaatii Koomaand Poostii Labsii Yeroo Ariifachiisaa beeksise.
Waajjirichi akka beeksisetti, Addi Bilisummaa Oromoo Mooyyaalee fi naannichatti tarkaanfii fudhachuu malaan sodaachuun jiraattonni qayee isaanitirraa buqqa’anii gara Keeniyaa cee’aniiru.
Amma garuu naannichi tasgabbaa’aa jiraachuu isaatin jiraattonni deebi’aa kan jiran yammuu ta’u, isaan hafanis deebisuuf hojjetamaa jira jedheera waajjirichi ibsa isaatin.
Lammiilen rakkoo nageenyaa uumamuu malu shakkuun gara Keeniyaatti baqatan kuma 7 amma kuma 8 ta’uun ibsamuun ni yaadatama kan jedhe waajjirichi, hojii abbootii Gadaa, jaarsolii biyyaa fi koomaand poostii naannichaatin hojjetameen ummanni fedhiidhan deebi’aa jiraachuu ibseera.
Koomaand poostichi yeroo ammaa lammiilen Keeniyaatti hafan dhibbaan kan lakkaa’aman ta'uu himeera.
Yeroo ammaa Mooyyaaleen tasgabbiirra jiraachuu kan hime waajjirichi, qaamoleen tokko tokko dhaabbilee deeggarsaatti da’achuun oduu dharaa tamsaasaa jiru jedheera.
Qaamoleen kanneen gochaa akkanaarraa of hin qusatan taanan tarkaanfii seeraa fudhachuuf akka dirqamu Waajjirri Sakreetaariyaatii Koomaand Poostii Labsii Yeroo Ariifachiisaa ibseera.
Oduuwwan Biroo « Oromiyaa fi Afaaritti saaxilama balaa lolaa adda baasuun, ittisuun hojjetamaa jira	Lakkoofsa lammiilee Mooyyaaledhaa buqqa’an dabaluun bu’aa argachuuf carrraaqqamaa jira- ambaasaaddar Diinaa »